Aarthik Abhiyan:र यो पनि
काठमाडौं । नेपालसहित केही एशियाली देशमा चामल अर्थात् भात खाने चलन धेरै छ । भात बढी खाँदा मोटोपना बढ्छ भन्ने धारणा हामीकहाँ पछिल्लो समय बढेको छ । मोटाइने अनि पेट लाग्ने डरकै कारण दुब्ला पातला मानिसले समेत सकेसम्म कम भात खाने गरेको पाइन्छ । तर जापानको क्योटोस्थित दोशिशा वुमन्स कलेज अफ लिबरल आर्ट्समा प...
बीमाको झुठो दाबी रकम पाउन मानिसहरुले विभिन्न हतकण्डा अपनाउने गरेको हामीले सुन्दै आएका छौं । तर यसका लागि कसैले आफ्नै हातै काट्ला त ? स्लोभेनियामा एक युवतीले झुठो बीमा दाबी गर्न आफ्नै हात काटेको त्यहाँको प्रहरीले आरोप लगाएको भन्दै समाचार संस्था बीबीसीले समाचार छापेको छ । समाचारमा उक्त युवतिको नाम भन...
पेचिङ (चीन) । चीनमा आकर्षक महिला कर्मचारीको प्रयोग गर्दै पुरुष कर्मचारीको खोजी गरेको भन्दै १ वर्षअघि ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको आलोचना भएको थियो । कम्प्युटर प्रोग्रामका कोडको लेखाजोखा राख्ने ‘कोडर’लाई आकर्षित पार्न यस्तो प्रयोग गरिएको कम्पनीमाथि आरोप थियो । आलोचनापछि कम्पनीहरूले उक्त विज्ञापनका लागि ख...
लन्डन (बेलायत) । कुनै पनि फोहोरको उचित व्यवस्थापनका लागि त्यसको प्रयोग विभिन्न कार्यमा हुँदै आएको छ । तर, मानवमलको भने उचित प्रयोग हुन सकेको छैन । केही स्थानमा भने यसलाई कृषि मलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । अब वैज्ञानिकहरूले मानवमलबाट भवन निर्माणको सामग्री बनाउने मार्ग पत्ता लगाएका छन् । वैज्ञानिकहरूले...
बर्लिन (जर्मनी) । जर्मन फेशन डिजाइनर कार्ल लागरफेल्डको बिरालो करोडौं डलरको मालिक बन्ने क्रममा छ । गत हप्ता लागरफेल्डको मृत्यु भएको छ । उनी फ्रान्सेली फेशन कम्पनी च्यानलका फेशन डिजाइनर थिए । उनको सम्पत्ति १९ करोड ५० लाख डलर रहेको अनुमान गरिएको छ । सुपेट लागरफेल्डको उत्तराधिकारी हो । ‘मलाई केही भइहाल...
फागुन १, टोकियो (जापान) । जापान विश्वमै सबैभन्दा लामो कार्यसमय भएको देशमध्ये पर्दछ । नियमित समयपछि मासिक ८० घन्टाभन्दा बढी ओभरटाइम गर्ने जापानीहरुको जमात ठूलो छ । अझ बिना तलब घन्टौं ओभरटाइम गर्नेको संख्या पनि धेरै छ । अत्यधिक कामको कारण आत्महत्या गर्ने र मर्ने (कारोसी) को संख्या पनि हालैका वर्षमा बढ...
पछिल्लो समय स्वीडेनमा स्टार्ट-अप कम्पनीहरु निकै फस्टाइरहेका छन् । हालैका वर्षहरुमा यसले आफूलाई यूरोपको सबैभन्दा नवप्रवर्तनमुखी देशको रुपमा समेत उभ्याएको छ । त्यहाँको मजबुत डिजिटल पूर्वाधार, सहयोग गर्ने संस्कृति र अन्य देशको तुलनामा लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने निजी बेरोजगारी बीमा आदीका...
पुरुषको भन्दा ४ वर्ष जवान महिलाको दिमाग
उमेर ढल्किँदै जाँदा महिलाको तुलनामा पुरुषको मस्तिष्क चाँडै खुम्चिन्छ भन्ने कुरा यसअघि भएका अध्ययनहरूले नै देखाइसकेका छन् । तर पुरुषको तुलनामा महिलाको दिमाग बढी जवान हुने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकाको वाशिंग्टन युनिभर्सिटीमा स्कूल अफ मेडिसिनका अनुसन्धाताको एक टोलीले गरेको अध्ययनले यस्तो देखा...
मानव मल दान
माघ १४, काठमाडौं (अस) । हामीले रक्तदान, बोनम्यारो दान र शरीरका अन्य अंग दानबारे त धेरै सुनेकै छौं । एक दाताले शरीरका अंग दान गरेर मात्रै आठ जनासम्म मानिसको ज्यान बचाउन सक्छन् । त्यस्तै, तन्तुहरु दान गरेर १ सय जनाभन्दा धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ । तर मानव मल दान गर्दा हुन सक्ने लाभबारे तपाईलाई थाहा छ...
जिन परिवर्तन : बोटबिरुवाको वृद्धि विकास बढाउने उपाय
काठमाडौं । केही दिनअघि पत्र–पत्रिकामा प्युठानको स्वर्गद्वारीमा नाङ्लो जस्तो देखिने ठूल्ठूला पात भएको रायोको सागका तस्वीर छापिएका थिए । हामीले तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्ने तोरी, चम्सुर, मेथीलगायत साग पनि अहिले हामीले देखिरहेको भन्दा दोब्बर तेब्बर अग्ला हुन सक्लान् त ? पछिल्लो समय वैज्ञानिहरूले बोटबिरु...